Milamina ary miasà ho maitso
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Milamina ary miasà ho maitso
Ny trano fandraisam-bahiny Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, miorina eo amin'ny sisintanin'ny Larvotto Marine Reserve ao amin'ny Principality of Monaco, dia manolo-tena amin'ny fampandrosoana maharitra. Ny teny filamatra ekipa maintso an'ny Hotely, 'Keep Calm and Act Green' dia mamintina ny fomba feno hafanam-po hiarovana ny zoron'izy ireo kanton'ny Mediteraneana.
Nanomboka tamin'ny volana oktobra 2013, ny trano fandraisam-bahiny Monte-Carlo Bay Hotel & Resort dia nanome rafitra sy fotony ho an'ny politikany fampandrosoana maitso. Ny komitin'ny mpilatsaka an-tsitrapo, nantsoina hoe ny ekipan'ny Bay Be Green dia natsangana tamin'izany fotoana izany mba hiara-hivondrona mpikambana ao amin'ny hotely dimy ambin'ny folo izay mivory isan-kerinandro hampavitrika sy hanara-maso ireo asa maharitra
Ny ekipa Bay Be Green dia mampiasa ny Green Globe Standard ho an'ny fizahan-tany maharitra mba hitarika ny ezaka ataon'izy ireo, ka nahatonga an'i Monte-Carlo Bay Hotel & Resort nomena mari-pankasitrahana Green Globe indray.
Nahazo mari-pankasitrahana isan-taona ny trano fandraisam-bahiny nanomboka ny volana aprily 2014 noho ny hetsika sosialy sy tontolo iainana. Ny mpiasa dia mavitrika amin'ny fanodinana fitaovana isan-karazany ao anatin'izany ny cartridges, ny bateria, ny taratasy, ny tavoahangy plastika, ny kapoaka sy ny maro hafa. Ny satroka plastika dia alefa any amin'ny fikambanana "Les Bouchons d'amour" hamitana azy ireo hanampiana ireo sembana.
Ny hafanam-pon'ny mpiasa dia zaraina amin'ny vahiny mampiasa Shiro Alga Carta; famantarana vita amin'ny taratasy ahidrano miendrika ahidrano maitso kely, izay apetraka amin'ny efitrano tsirairay. Entanina ny vahiny hanasaraka ny fako toy ny taratasy sy bateria ary hanampy amin'ny fampihenana ny fanjifana angovo. Mba hampitomboana ny tolona fanoherana ny fiovan'ny toetr'andro, tsy mampiasa afa-tsy herinaratra maitso 100% ny hotely ary mampiasa fiara madio toy ny scooter elektrika sy fiara Twizzy.
Ny Monte-Carlo Bay Hotel & Resort dia manome fandraisana anjara sarobidy ihany koa ho an'ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana. Mpiara-miasa amin'ny AMAPEI ny hotely, manolotra asa ho an'ny olon-dehibe kilemaina miasa amin'ny asa fototra toy ny fonosana fametahana marika. Fikambanana maro hafa eo an-toerana ihany koa no mahazo fanampiana, ao anatin'izany, Les Bouchons d'Amour, Les Anges Gardiens de Monaco, SIVOM - Tsy misy Krismasy tsy misy Presents, Pacôme - Clothes Collection & Recycling, Scouts of Monaco, SOLIDARPOLE, France Cancer ary The Foundation of Prince Albert II.
MONACOLOGY dia herinandro fanentanana isan-taona natokana hananganana fahatsiarovan-tena momba ny tontolo iainana ao amin'ny Principality of Monaco. Nandritra ity festival tamin'ny taon-dasa ity, ankizy 150 taona 6 ka hatramin'ny 12 no nankafy ny fotoana natolotry ny mpikambana ao amin'ny Bay Be Green Team mampianatra foto-kevitra maharitra momba ny faharetana. Ny ekipan'ny Bay Be Green dia mirehareha amin'ny hetsika fanabeazana ary mihoatra ny 230 ny mpiasan'ny hotely no efa niofana momba ny lohahevitra fampandrosoana maharitra.
Green Globe dia rafitra maharitra maharitra miorina amin'ny fenitra eken'ny sehatra iraisam-pirenena momba ny asa maharitra sy ny fitantanana ny orinasan-fizahan-tany sy fizahan-tany. Miasa eo ambanin'ny fahazoan-dàlana manerantany, Green Globe dia monina any California, Etazonia ary manana firenena 83 mahery. Green Globe dia mpikambana iray ao amin'ny United Nations World Tourism Organization (UNWTO). Raha mila fanazavana, tsidiho azafady greenglobe.com
Ireo mpandeha tratry ny olan'ny British Airways IT dia mahazo onitra
Manohana ny asan'ny Travel Gay Canada ny governemanta hisarika mpizahatany LGBTQ2 bebe kokoa